एजेन्सी, ३ वैशाख । कोरोना भाइरसबाट संसारमा अहिलेसम्म १.२० लाभन्दा बढी मानिसको मृत्यू भइसकेको छ । २० लाखभन्दा धेरै मानिस संक्रिमत छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक दुई घण्टामा नियमित हात धुन र बिनाकारण नाक, आँखा, कान नछुन अपिल गर्दै आइरहेको छ । तर आदतको दास बनेका मानिसहरु यसबाट बच्न सकिरहेका छैनन् । एक अनुसन्धानका अनुसार एक घण्टामा एकजना मानिसले झण्डै २३ पटक अनुहार छुने गर्दछ ।
यो निष्कर्ष अमेरिकाका डा. नैसी सी एल्डर, डा. विलियम पी सायर र अष्ट्रेलियाका डा. म्याक्लाव्सले आफ्नो अध्ययनको आधारमा गरेका हुन् ।
यी तीनैजना चिकित्सकले अनुहार छुने बानीमाथि अध्ययन गरिरहेका छन् । न्यूयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा यी तीनै जना चिकित्सकले भनेका छन्, ‘कोरोनाबाट बच्ने हो भने मानिसहरुले बिनाकारण अनुहार छुने बानी त्याग्नुपर्छ ।’
१. आँखा, कान र नाक छुने फोहोरी बानी हतपती जाँदैन
पोर्टल्याण्डस्थित ओरेगन हेल्ठ्ठ एण्ड साइन्स युनिभर्सिटीमा परिवार स्वास्थ्यका प्रा.डा. न्यान्सी सी एल्डरका अनुसार आँखा, कान र नाकलाई छुनु मानिसको घिनलाग्दो बानी हो । आँखा मिच्नु, नाक कोटेयाउनु र गाली र चिउँडोमा औंला रगड्नु मानिसका सामान्य बानी हो । उनले आफ्नो क्लिनिकका स्टाफमध्येबाट ७९ मानिसलाई काम दिएर एउटा कोठामा दुई घण्टा छाडिदिए । अध्ययन गर्दा सबैले १ घण्टामा आफ्नो अनुहारका विभिन्न अंगमा १९ पटक छोए । उनका अनुसार अनुहार कोरोना भाइरसलाई हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा पुग्न सजिलो माध्य हो । यसकारण मानिसले आफ्नो अनुहार चलाउने बानी त्याग्नुपर्छ ।
२. मानिसहरु सार्वजनिक स्थानमा पनि बिनाफ्रिकी अनुहार चलाइरहेका हुन्छन्
ओहियोको शेरोनभिलेमा फ्यामिली फिजिसिएन र Henrythehand.com का संसा्थपक डा. विलियम पी. सायर मानिसको हात स्यानिटाइज गर्ने र बिनाकारण अनुहारको ‘टी जोन’ (निधार, आँखा, नाक र ओठ) छुने बानीविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाउँछन् । उनको कार्यक्रममा बुढादेखि बच्चासम्म सहभागी हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘जो पनि आफ्नो अनुहार छुन्छ र यसलाई छाड्नु एक कठिक काम हो । मैले देख्छु कि मानिस कोरोनाजस्तो महामारीमा पनि सार्वजनिक ठाउँमा जान्छन्, लिफ्ट, बस, रेल, मेट्रो, ट्याक्सी आदिमा पुगेर पनि अनुहार छुन छाड्दैनन् । यदि तपाईंले आफ्नो अनुहारको म्युकस मेम्ब्रेन अथवा झिल्ली छुनुहुन्छ भने तपाईंको श्वासप्रश्सावमा संक्रमण वा यससम्बन्धि रोग ग्रसित हुने सम्भावना रहन्छ ।’
३. कतिपय मानिसमा एक मिनेटमै १२ पटकसम्म अनुहार छुन्छन्
सिड्नीस्थित साउथ वेल्स विश्वविद्यालयमा महामारी र संक्रमण विषयका प्रोफेसर र २०१५ मा ‘फेस टचिङ’ नामक विषयमा अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने डा. म्यारी-लुईस म्याक्लाव्स भन्छिन्, ‘मेरो रिपोर्ट कोरोनाको यो क्रममा प्रासंगिक छ । मैले यो रिपोर्ट आफ्नो २६ विद्यार्थीमाथि आधार बनाएर तयार बनाएको थिएँ, जसमा हरेक एक घण्टाको क्रममा मानिसले औसतरुपमा २३ पटक अनुहार छुने पाएको थिएँ । म सम्मेलनको क्रममा संसारका धेरै भागमा गइरहन्छु । सामान्यत मानिसएक मिनेटभित्र नै दर्जनौंपटक आफ्नो आँखा, नाक, कान र निधार बेपरवाह तरिकाले स्पर्श गर्छन् ।’